Tag: njikarịcha | Martech Zone
A Procrastinator si Nduzi Ezumike Marketing
Oge ezumike bụ ezumike ebe a, ọ na-akpụzi ka ọ bụrụ otu n'ime ndị kachasị na ndekọ. Na eMarketer na-ebu amụma azụmahịa e-commerce na-emefu gafee $ 142 ijeri oge a, enwere ọtụtụ ezigbo ihe ịga gburugburu, ọbụlagodi maka obere ndị na-ere ahịa. Ihe na-eme ka asọmpi na-aga n'ihu bụ inwe ọgụgụ isi banyere nkwadebe. O doro anya na ị ga-amaliteworị usoro a, na-eji ọnwa ole na ole gara aga ịhazi mkpọsa gị wee wuo aha na ndị na-ege ntị.
Search engines chọta isiokwu dị iche iche dị iche iche nke ibe ma jiri ha chọpụta ma peeji a ga-etinyere ya na nsonaazụ ụfọdụ. Ojiji ojiji nke isiokwu ga-eme ka edepụta peeji gị maka ọchụchọ a kapịrị ọnụ mana ọ naghị ekwe nkwa itinye ma ọ bụ ọkwa n'ime ọchụchọ ahụ. E nwekwara ụfọdụ nkịtị isiokwu emehie izere. Ibe obula kwesiri ileba anya na mkpokọta okwu. N'uche m, ịkwesighi inwe peeji
Etu esi eweputa ihe omuma nke ihe omuma
Bọchị Sọnde, Machị 12, 2017 Thursday, June 29, 2017 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na otu isiokwu ma ọ bụ blọọgụ nwere ike ịpụta dịka akụkọ dị mkpirikpi, ndị ọbịa na-achọ ozi na-ahụ n'anya ịhụ ozi ahụ kachasị na usoro na-agbanwe agbanwe. Onye na-agụ otu isiokwu nwere ike iji nlezianya gụọ okwu nke ọ bụla, ahịrị nke ọ bụla na paragraf ọ bụla. Agbanyeghị, onye ọbịa nke na-achọ ihe ọmụma nwere ike ịchọ ịpịcha peeji ahụ ngwa ngwa ma wụsa ozugbo na ozi ha na-achọ ịchọta ma ọ bụ ịmụtakwu banyere. Mepụta ihe ọmụma na-egbu egbu nwere ike ọ gaghị abụ